VirtueMart online payment transaction in Joomla - MYSTERY ZILLION
VirtueMart online payment transaction in Joomla
website မှာ online payment transaction သုံးချင်လို့ ကူညီကြပါ
VirtueMart 1.1.3 တော့ သုံးထားပါတယ် . အထဲမှာတော့ paypal လဲရှိပါတယ် .
အပေါ်ကလင့်ကို ၀င်ဖတ်ပြီး သူပြောတဲ့ အတိုင်းပြင်ပါတယ် . သူကတော့ install လုပ်စရာမလိုဘူးပြောပေမဲ့ . တခုခုများလိုနေမလားလို့ .
Website စာမျက်နှာမှာမပေါ်လာပါဘူး . စျေးနှုန်းအမောက်ကိုလဲ စာမျက်နှာမှာ မဖော်ထားပါဘူး . မမြင်စေချင်လို့ပါ . ဒါပေမဲ့ အဲလိုမျိုး စျေးနှုန်းအမောက်ကိုမဖော်ပြထားတာက paypal နဲ့ဘာမှမပတ်သတ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်နော် . ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ paypal နဲ့ပတ်သက်ပြီး စာမျက်နှာမှာ တခုမှမပေါ်လဲ နားမလည်ဘူး .
အခုမှ စလုပ်ဖူးတာဆိုတော့ သူ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဘယ်လိုလာမလဲ မမြင်ဘူးလဲ ဖြစ်နေတယ် .
ကူညီကြပါ . ဒီ၁ရက်အတွင်းအပြီးလုပ်ရမှာတဲ့ :mad:
joomla ရဲ့ module manager ထဲမှာ enable ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်လေး ရွေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ မရရင် module ကို install ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ။